Madaxa UNICEF ee Soomaaliya oo tegay Garowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland ahna ku simaha Madaxweynaha Eng. Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 13-5-2015 aqalka madaxtooyada Puntland ee Garoowe ku qaabilay Madaxa Hay’adda UNICEF ee Soomaaliya Mr. Steven Lauwerier.
Kullan gaar ah oo Madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng. Camey la qaatay Mr. Steven Lauwerier iyo wefdigii la socday ayaa waxaa ku wehliyey Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Puntland Cali Axmed Faatax, Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Puntland Dr. Saadiq Eenow iyo Wasiirka Amniga Puntland Xassan Cismaan Maxamuud Aloore.
Mudadii uu socday kullanka ayaa waxaa looga hadlay dar dargelinta howlaha horumarineed ee hay’adda UNICEF ka wado gudaha Puntland iyo dib u howlgelinta xafiisyadii ay ka baxeen shaqaalihii hay’adda ee dhawaan qaraxii Garoowe ka dhacay ku geeryooday.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng. Cabdixakiin Camey ayaa madaxda Hay’adda UNICEF ee Soomaaliya uga mahadceliyey imaanshihiisa Puntland iyo sida ay uga go’antahay in marnaba aysan hakin howlaha muhiimka ah ee ay ka wadaan Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya.
Mr. Steven Lauwerier ayaa sheegay in qorshaha sanadkoodaan baahsan yahay dhammaana ay adeegyadooda gaarsiinayaan Gobolada iyo guud ahaan Degmooyinka Puntland, waxaana uu tilmaamay in yoolka UNICEF-na uu yahay in ilmo kasta iyo Hooyo kasta ay helaan adeega asaasiga ah.
Ugu dambeyn, Cabdixakiin Camey iyo Steven Lauwerier ayaa isla meel dhigay hirgelinta mashaariicda hay’adda UNICEF ee Puntland oo si siman loo gaarsiiyo shacabka reer Puntland.
Bishii hore ee April ayaa magaalada Garowe lagu qarxiyey gaari ay la socdeen shaqaalaha Hay’adda UNICEF, waxaana halkaas ku dhintay 7 ruux oo qaarkoo ajnabi ahaayeen.
Alshabaab oo sheegay iney weerar ku qaadeen gudaha Kenya